Qaar ka mid ah Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD oosoo gaarey Muqdishu – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdigii u horeeyy ee Wasiirada Arrimaha Dibada Urur Goboleedka IGAD ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibada Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf uu ahaa wasiirkii u horeeyay ee saakay ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Arrimaha Dibada Jabuuti ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhoweeyay Sii hayaha Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle, safiirka Jabuuti ee Soomaaliya iyo Safiirada Caalamka u fadhiya Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka waxaa iyana goor dhow la filayaa inuu Garoonka diyaaradaha Aadan cadde ka soo dego wafdiga ka socda Koofurta Sudan, Uganda, Itoobiya iyo Sudan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in xubnaha wasiirada arrimaha dibada IGAD ay intooda badan maanta oo jimco ah ay imaanayaan Muqdisho, si maalinta berri oo Sabti ah uga qeyb galaan shirkii 53aad ee Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD.
Caawa ayaa la filayaa in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kulan casho sharaf ugu sameeyo Xarunta Madaxtooyada.
Qaban qaabada shirka ayaa si aad ah uga socota magaalada Muqdisho, iyadoo ammaankuna si aad ah loo adkeeyay, ciidamada ayaa xiray wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka degmooyinka Gobolka Banaadir.
Shirkan ayaa maalinta berri ka furmi doona Hotel ku dhow Xarunta Madaxtooyada, iyadoo Hotelkan lagu magacaabo SYL, kaasoo nasiib u yeelan doona in markii u horeysay ee la furo inuu ku marti geliyo shirka Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD.
Shirka Wasiirada Arrimaha Dibada ayaa waxaa maalinta berri furi doona Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo shirka oo ah mid hal maalin ah looga hadli doono arrimaha ammaanka, siyaasada iyo arrimo kale oo wadamada IGAD quseeya.